Mụta Ịna-ejide Onwe Gị​—⁠Ndị Galeshia 5:​22, 23
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Amis Angolan Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Bolivian Sign Language Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Dangme Danish Digor Douala Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Fon French French Sign Language Ga Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Hungarian Sign Language Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mexican Sign Language Mingrelian Mixe Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Romanian Sign Language Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
“Mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ . . . njide onwe onye.”​—⁠GAL. 5:​22, 23.
ABỤ: 83, 52
Gịnị ka anyị kwesịrị ịmụta n’ihe Chineke mere mgbe e nupụụrụ ya isi?
Na Baịbụl, olee ụfọdụ ndị e kwuru na ha jidere onwe ha nakwa ndị na-ejideghị onwe ha?
Olee otú ịmụ Baịbụl ga-esi nyere anyị aka ịmụta ịna-ejide onwe anyị?
1, 2. (a) Olee nsogbu ndị mmadụ nwere ike inwe n’ihi na ha anaghị ejide onwe ha? (b) Gịnị mere ịtụle isiokwu a kwuru gbasara mmadụ ijide onwe ya ji baa uru taa?
NJIDE ONWE ONYE bụ àgwà Jehova Chineke ga-enyeliri anyị aka ịmụta. (Gal. 5:​22, 23) Ọ naghị esiri Jehova ike ijide onwe ya. Ma, ọ na-esiri anyị ike ime otú ahụ n’ihi na anyị ezughị okè. Ọtụtụ nsogbu ndị mmadụ na-enwe taa bụ n’ihi na ha anaghị ejide onwe ha. Nke a nwere ike ime ka ha na-eyigharị ihe ndị ha chọrọ ime, ghara ịna-eme nke ọma n’ọrụ ha, nakwa n’ụlọ akwụkwọ. O nwekwara ike ime ka ndị mmadụ na-agwa ibe ha okwu ọjọọ, na-aṅụbiga mmanya ókè, na-alụ ọgụ, na-agba alụkwaghịm, na-eji ụgwọ n’enweghị isi, ma na-aṅụ ọgwụ ọjọọ. Nsogbu ndị ọzọ o nwere ike ịkpata bụ ịga mkpọrọ, obi ọjọọ, ibute ọrịa ọjọọ n’ihi ịkwa iko, ịtụ ime ọkwà, nakwa nsogbu ndị ọzọ.​—⁠Ọma 34:​11-14.
2 O doro anya na ndị na-anaghị ejide onwe ha na-akpatara onwe ha na ndị ọzọ nsogbu. Ọtụtụ ndị anaghịzi ejide onwe ha. Nchọpụta ndị e mere n’agbata afọ 1941 na afọ 1949 gosiri na ndị mmadụ anachaghị ejide onwe ha. Ma, ihe ndị a chọpụtara n’oge na-adịbeghị anya gosiri na ọ kala njọ. O kwesịghị iju ndị na-amụ Baịbụl anya n’ihi na Baịbụl kwuru na otu n’ime ihe ndị gosiri na anyị bi “n’oge ikpeazụ” bụ na ndị mmadụ ‘anaghị ejide onwe ha.’​—⁠2 Tim. 3:​1-3.
3. Gịnị mere Ndị Kraịst ji kwesị ịmụta ịna-ejide onwe ha?
3 Gịnị mere anyị ji kwesị ịmụta otú anyị ga-esi na-ejide onwe anyị? O nwere ihe abụọ mere anyị ji kwesị ịmụta ya. Nke mbụ bụ na a chọpụtara na ndị na-ejide onwe ha anaghị enwecha nsogbu otú ndị na-anaghị ejide onwe ha na-enwe. Uche ha na-akpakọ ọnụ, ha na ndị ọzọ na-adị ná mma, ha anaghịkwa ewe iwe ọsọsọ, ma ọ bụ daa mbà n’obi. Nke abụọ bụ na ọ bụrụ na anyị chọrọ ka anyị na Chineke dịrị ná mma, anyị kwesịrị imeri ọnwụnwa ndị na-abịara anyị ma ghara ịna-eme ihe ọjọọ ndị na-agụ anyị agụụ. Adam na Iv emeghị otú ahụ. (Jen. 3:⁠6) Chee echiche ọtụtụ nsogbu ndị mmadụ nwerela kemgbe ahụ Adam na Iv nupụchaara Chineke isi n’ihi na ha ejideghị onwe ha.
4. Olee ihe ga-agba onye ọ na-esiri ike ijide onwe ya ume?
4 Jehova ma na anyị ezughị okè, nakwa na ọ na-esiri anyị ike ijide onwe anyị. Ọ chọkwara inyere anyị aka ka anyị ghara ịna-eme ihe ọjọọ na-agụ anyị agụụ. (1 Eze 8:​46-50) Ebe ọ bụ ezigbo Enyi anyị, ọ na-agba ndị ọ na-esiri ike ijide onwe ha mgbe ụfọdụ ume. Ka anyị tụlee ihe Jehova merela iji gosi na ọ na-ejide onwe ya. Anyị ga-amụkwa gbasara ndị jidere onwe ha na ndị na-ejideghị onwe ha a kọrọ akụkọ ha na Baịbụl. Anyị ga-elebakwa anya n’ihe ndị anyị ga-eme ga-enyere anyị aka ịna-ejidekwu onwe anyị.
JEHOVA NA-EJIDE ONWE YA
5, 6. Olee ihe Jehova mere nke gosiri na ọ na-ejide onwe ya?
5 Jehova na-ejide onwe ya mgbe niile n’ihi na o zuru okè. (Diut. 32:⁠4) Ma, anyị ezughị okè. N’agbanyeghị nke ahụ, anyị kwesịrị ileba anya n’otú Jehova sirila jide onwe ya, ka anyị nwee ike ịna-eme ka ya. Ime otú ahụ ga-enyere anyị aka ime ihe ziri ezi ma mmadụ kpasuo anyị iwe. Olee ihe ụfọdụ ndị gosiri na Jehova na-ejide onwe ya?
6 Chegodị otú Jehova si jide onwe ya mgbe Setan kpachaara anya nupụrụ ya isi. Ọ ga-abụ na ihe a Setan mere were ndị mmụọ ozi iwe, ma mee ka ha kpọọ ya asị. Ọ ga-abụkwa na ọ dị gị otú ahụ ma ị na-ahụ ahụhụ niile Setan kpatarala ndị mmadụ. Ma, Jehova jidere onwe ya, meekwa ihe kwesịrị ekwesị. Kemgbe ahụ, ọ nọkwa na-eme ihe kwesịrị ekwesị nakwa ihe ndị gosiri na ọ naghị ewe iwe ọsọsọ. (Ọpụ. 34:6; Job 2:​2-6) Maka gịnị? Jehova hapụrụ ka oge gaa n’ihi na ọ chọghị ka e bibie onye ọ bụla, kama “ọ chọrọ ka mmadụ niile chegharịa.”​—⁠2 Pita 3:⁠9.
7. Gịnị ka anyị nwere ike ịmụta n’otú Jehova si jide onwe ya?
7 Otú Jehova si jide onwe ya na-akụziri anyị na tupu anyị ekwuo okwu ma ọ bụ mee ihe, anyị kwesịrị ichebara ya echiche ma ghara ime ihe ọkụ ọkụ. Ọ bụrụ na e nwere ihe dị mkpa ị chọrọ ikpebi ime, buru ụzọ chebara ya echiche. Rịọ Jehova ka o nye gị amamihe ị ga-eji kwuo ma ọ bụ mee ihe kwesịrị ekwesị. (Ọma 141:⁠3) Ọ na-adịrị anyị mfe ime ihe anyị na-ekwesịghị ime ma a kpasuo anyị iwe. Ọtụtụ n’ime anyị akwaala mmakwaara mgbe anyị kwuchara okwu ma ọ bụ mee ihe n’echeghị echiche.​—⁠Ilu 14:29; 15:28; 19:⁠2.
NDỊ OHU JEHOVA NDỊ JIDERE ONWE HA NA NDỊ NA-EJIDEGHỊ ONWE HA
8. (a) Olee ebe a kọrọ akụkọ gbasara ndị jidere onwe ha? (b) Gịnị mere Josef ji gbaa ọsọ mgbe nwunye Pọtịfa chọrọ ka ha kwaa iko? (Lee ihe e sere ná mmalite isiokwu a.)
8 Ole ndị a kọrọ gbasara ha na Baịbụl gosiri na mmadụ ijide onwe ya bara uru? E nwere ọtụtụ n’ime ha a kọrọ na ha jidere onwe ha mgbe ọnwụnwa bịaara ha. Otu n’ime ha bụ nwa Jekọb aha ya bụ Josef. O jidere onwe ya mgbe ọ na-ejere Pọtịfa ozi. Pọtịfa bụ onyeisi ndị na-eche Fero nche. Nwunye Pọtịfa malitere ịnwụrụ Josef n’ihi na ‘ọ bịara maa mma n’ahụ́, maakwa mma ile anya.’ Ọ chọkwara ka ya na Josef kwaa iko. Gịnị mere Josef ji gbaara ya ọsọ n’agbanyeghị nsogbu o nyere ya ugboro ugboro ka ha kwaa iko? Ọ ga-abụ na Josef chebaara nsogbu ọ ga-akpatara ya echiche ma o mee otú ahụ. Mgbe nwaanyị ahụ jidere ya n’uwe ka ha kwaa iko, ọ hapụụrụ ya uwe ya ma rie mbọ mbọ. Josef kwuru, sị: “Olee otú m ga-esi mee oké ihe ọjọọ a wee mehie Chineke?”​—⁠Jen. 39:​6, 9; gụọ Ilu 1:⁠10.
9. Olee otú i nwere ike isi jikere maka imeri ọnwụnwa?
9 Olee ihe anyị mụtara n’ihe a Josef mere? Otu n’ime ya bụ na a nwaa anyị ọnwụnwa imebi iwu Chineke, anyị kwesịrị ịgba mbọ merie ya. Tupu ụfọdụ ndị aghọọ Ndịàmà Jehova, ha na-eribiga ihe ókè, na-aṅụbiga mmanya ókè, na-aṅụ sịga, na-aṅụ ọgwụ ike, na-akwa iko, na-emekwa omume ọjọọ ndị ọzọ. Mgbe e mechakwara ha baptizim, ihe ndị a nwekwara ike ịna-agụ ha agụụ ime mgbe ụfọdụ. Mgbe ọ bụla a nwara gị ọnwụnwa ka i mebie iwu Jehova, gbalịa chee otú ọ ga-esi mee ka gị na Jehova gharazie ịdị ná mma ma ọ bụrụ na i jideghị onwe gị. Buru ụzọ chee ihe ndị e nwere ike iji nwaa gị ọnwụnwa ma kpebie otú i nwere ike isi gbaara ha ọsọ. (Ọma 26:​4, 5; Ilu 22:⁠3) Ọ bụrụ na nke ọ bụla n’ime ha abịara gị, rịọ Jehova ka o nye gị amamihe, nakwa ka i jide onwe gị ka i nwee ike imeri ọnwụnwa ahụ.
10, 11. Olee ọnwụnwa na-abịara ọtụtụ ndị na-eto eto n’ụlọ akwụkwọ? (b) Olee ihe nwere ike inyere Ndị Kraịst na-eto eto aka ịgbara ịkwa iko ọsọ?
10 Ụdị ọnwụnwa ahụ bịaara Josef, abịakwarala ọtụtụ Ndị Kraịst na-eto eto. Chegodị gbasara otu nwa agbọghọ aha ya bụ Kim. Ọtụtụ ụmụ klas ya na-akwakarị iko. Ha bịa ụlọ akwụkwọ, ha na-akọ otú ha si kwaa iko ná ngwụcha izu. Ma, Kim enweghị nke ọ ga-akọ. O kwuru na ihe a mere ka ọ na-eche mgbe ụfọdụ na “a jụrụ ya ajụ.” O kwukwara na ụmụ klas ya na-ele ya anya ka onye iberiibe n’ihi na e nweghị onye ya na ya na-akpa. Ma, Kim ma na ya erubeghị ka ya na nwoke kpawa. Ọ makwa na mgbe agụụ ịkwa iko na-aka agụ mmadụ bụ mgbe ọ na-eto eto. (2 Tim. 2:22) Ụmụ akwụkwọ ibe ya na-ajụkarị ya ma ọ̀ ka bụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke. Ọ na-eji oge ahụ ha na-ajụ ya ajụjụ a akọwara ha ihe mere na ya achọghị ịkwa iko. Anyị ji Ndị Kraịst na-eto eto kpebisiri ike na ha agaghị akwa iko eme ọnụ. Jehova jikwa ha eme ọnụ.
11 Baịbụl gwara anyị gbasara ndị na-agbaraghị ịkwa iko ọsọ iji dọọ anyị aka ná ntị. Ọ gwakwara anyị nsogbu ndị ọ ga-akpatara anyị ma anyị ejideghị onwe anyị. Ọ bụrụ na ụdị ihe ahụ mere Kim emee gị, i kwesịrị iche gbasara nwa okorobịa ahụ na-enweghị uche a kọrọ akụkọ ya n’Ilu isi asaa. Cheekwa gbasara ihe Amọn mere na nsogbu ọ kpataara ya. (2 Sam. 13:​1, 2, 10-15, 28-32) Ndị nne na nna nwere ike inyere ụmụ ha aka ka ha mụta ịna-ejide onwe ha, nakwa ka ha mata otú nwoke na nwaanyị kwesịrị isi na-akpa. Otú ha ga-esi eme ya bụ iji amaokwu Baịbụl ndị anyị kwurula okwu ha kwurịta banyere ya mgbe ha na-enwe ofufe ezinụlọ.
12. (a) Olee otú Josef si jide onwe ya ka ụmụnne ya ghara ịmata onye ọ bụ? (b) Olee oge ndị anyị kwesịrị ijide onwe anyị?
12 E nwekwara oge ọzọ Josef mere ihe gosiri na ya na-ejide onwe ya. Mgbe ụmụnne ya bịara Ijipt ka ha zụrụ nri, Josef emeghị ka ha mata onye ọ bụ. Ihe mere o ji mee ya bụ ka ọ mata ihe dị ha n’obi. Mgbe ọ na-enweghịzi ike ijide onwe ya, ọ hapụrụ ha gaa ebe ọzọ bewe ákwá. (Jen. 43:​30, 31; 45:⁠1) Ọ bụrụ na nwanna gị ma ọ bụ onye ị hụrụ n’anya akpasuo gị iwe, ime ka Josef ga-eme ka ị ghara ime ihe ma ọ bụ kwuo ihe ị ga-emecha kwaa mmakwaara. (Ilu 16:32; 17:27) A chụọ ndị ikwu gị n’ọgbakọ, i kwesịrị ijide onwe gị ka gị na ha ghara ịna-emekọ ihe mgbe ọ na-adịghị mkpa. O nwere ike isiri gị ike ime ya. Ma ọ ga-adịrị gị mfe ime ya ma i cheta na ime otú ahụ na-egosi na ị na-eṅomi Jehova, nakwa na ị na-eme ihe ọ sị gị mee.
13. Gịnị ka anyị nwere ike ịmụta n’ihe Eze Devid mere?
13 Anyị nwere ike ịmụta ihe n’ihe Eze Devid mere. Mgbe Sọl na Shimiaị kpasuru ya iwe, o weghị iwe ma ọ bụ jiri ike o nwere mesie ha ike. (1 Sam. 26:​9-11; 2 Sam. 16:​5-10) Ma, ọ bụghị mgbe niile ka Devid jidere onwe ya. Otú anyị si mara bụ mmehie ya na Bat-shiba mere na ihe o mere mgbe Nebal onye anyaukwu kpasuru ya iwe. (1 Sam. 25:​10-13; 2 Sam. 11:​2-4) Ma, anyị nwere ike ịmụta ezigbo ihe n’ihe a Devid mere. Nke mbụ bụ na ndị okenye kwesịrị ịna-ejide onwe ha ka ha ghara iji ike ha na-eme ihe na-ekwesịghị ekwesị. Nke abụọ abụrụ na anyị ekwesịghị ịtụkwasị onwe anyị obi, na-eche na e nweghị mgbe ọnwụnwa ga-abịara anyị.​—⁠1 Kọr. 10:⁠12.
14. Olee ihe mere otu nwanna? Gịnị mere o ji dị mkpa ka anyị mee ihe nwanna a mere ma ụdị ihe ahụ mee anyị?
14 Gịnị ka ị ga-eme ka ị na-ejidekwu onwe gị? Chegodị gbasara akụkọ a mere eme. Otu ụgbọala kụrụ ụgbọala Nwanna Luigi n’azụ. Ọkwọ ụgbọala a malitere ịkparị Luigi, na-achọ ịlụso ya ọgụ n’agbanyeghị na ọ bụ ya chọrọ ya okwu. Luigi rịọrọ Jehova ka o nyere ya aka ijide onwe ya, gbalịakwa imeda onye nke ọzọ obi. Ma, nwoke ahụ akwụsịghị mba ọ nọ na-aba. Luigi deere nọmba ụgbọala nwoke ahụ ma si ebe ahụ pụọ, nwoke ahụ anọrọkwa na-aba mba. Mgbe otu izu gachara, Luigi gara nletaghachi na nke otu nwaanyị o ziri ozi ọma ma chọpụta na ọkwọ ụgbọala ahụ bụ di nwaanyị ahụ. Ahụ́ nwụrụ nwoke a, ya arịọ Luigi ka ọ gbaghara ya. O kwuru na ọ ga-aga ịhụ ụlọ ọrụ ịnshọransị nke Luigi ka ha bịa mezie ụgbọala Nwanna Luigi ozugbo. Nwoke a so nwunye ya mụọ ihe. Ihe ndị ọ nụrụ tọkwara ya ụtọ. Ihe a mere ka Luigi ghọta na otú ahụ o si jide onwe ya ụbọchị ahụ bara ezigbo uru n’ihi na a sị na o meghị otú ahụ, nsogbu gaara adị.​—⁠Gụọ 2 Ndị Kọrịnt 6:​3, 4.
Ihe anyị mere mgbe a kpasuru anyị iwe nwere ike ịba uru n’ozi anyị ma ọ bụ kpaa ya aka ọjọọ (A ga-akọwa ya na paragraf nke 14)
15, 16. Olee otú ịmụ Baịbụl ga-esi nyere gị na ezinụlọ gị aka ịmụta ịna-ejide onwe unu?
15 Ịmụchi Baịbụl anya ga-enyere Ndị Kraịst aka ịna-ejide onwe ha. Cheta na Chineke gwara Jọshụa, sị: “Akwụkwọ iwu a agaghị apụ n’ọnụ gị, ị ga na-agụkwa ihe dị na ya n’olu dị ala ehihie na abalị, ka i wee lezie anya mee ihe niile e dere na ya; n’ihi na mgbe ahụ, ị ga-eme ka ụzọ gị gaa nke ọma, mgbe ahụkwa, ị ga-eji amamihe mee ihe.” (Jọsh. 1:⁠8) Olee otú ịmụ Baịbụl ga-esi nyere gị aka ịmụta ịna-ejide onwe gị?
16 Anyị amụtala ọtụtụ ihe atụ ndị e kwuru na Baịbụl gosiri uru anyị ga-erite ma anyị na-ejide onwe anyị nakwa ahịa ọ ga-aghọ anyị ma anyị ghara ime otú ahụ. O nwere ihe mere Jehova ji mee ka e dee ha na Baịbụl. (Rom 15:⁠4) Ọ ga-abara anyị uru ma anyị na-agụ ha, na-echebara ha echiche ma na-amụ ha. Mgbe ị na-agụ ha, gbalịa ka ị ghọta otú ha si gbasa gị. Rịọ Jehova ka o nyere gị aka ka i mee ihe ị gụrụ n’Okwu ya. Ị chọpụta na e nwere ebe ị na-anaghị ejidecha onwe gị, kweta na ọ bụ nsogbu i nwere. Kọọrọ ya Jehova n’ekpere, ma gbalịa ka ị mata otú i nwere ike isi na-ejidekwu onwe gị. (Jems 1:⁠5) Mee nchọnchọ n’akwụkwọ anyị ka ị hụ ihe ndị e kwuru ga-enyere gị aka ịna-ejidekwu onwe gị.
17. Olee ụzọ dị iche iche ndị nne na nna nwere ike isi nyere ụmụ ha aka ịmụta ịna-ejide onwe ha?
17 Olee otú i nwere ike isi nyere ụmụ gị aka ịmụta ịna-ejide onwe ha? Ndị nne na nna ma na ụmụ ha ebughị àgwà a pụta ụwa. Ọ bụ ya mere ha ji kwesi ịna-akpa àgwà ọma ka ụmụ ha mụtakwa ịna-akpa àgwà ọma. (Efe. 6:⁠4) Ị chọpụta na ọ na-esiri ụmụ gị ike ịna-ejide onwe ha, jụọ onwe gị ma ị̀ na-ejide onwe gị. Ihe ga-enyere gị aka ịna-ejide onwe gị bụ ịna-agachi ozi ọma na ọmụmụ ihe anya, na-enwechikwa ofufe ezinụlọ anya. Ọ bụrụ na nwa gị asị gị meere ya ihe na-adịghị mkpa, gwa ya hoo haa na ị gaghị eme ihe ahụ. Jehova gwara Adam na Iv ihe ndị ha ga-eme na ihe ndị ha na-agaghị eme. Ihe ndị ahụ ọ gwara ha gaara enyere ha aka ịna-erubere Jehova isi. Otú ahụ ka ọ dịkwa aka ná ntị nne na nna na-adọ ụmụ ha. Ọ bụrụ na ha ana-adọ ụmụ ha aka ná ntị ma na-akpa àgwà ọma, ọ ga-eme ka ụmụ ha mụta ịna-ejide onwe ha. Irubere Chineke isi so n’otu n’ime ihe ndị kacha baa uru ụmụ gị kwesịrị ịmụta.​—⁠Gụọ Ilu 1:​5, 7, 8.
18. Gịnị mere anyị ga-eji kwesị ịsa anya ná mmiri mgbe anyị na-ahọrọ ndị anyị na ha ga na-akpa?
18 O doro anya na ma ànyị bụ nne ma ọ bụ nna, ma ọ bụkwanụ na anyị abụghị, anyị kwesịrị ịsa anya ná mmiri mgbe anyị na-ahọrọ ndị anyị na ha ga na-akpa. Ọ bụrụ na ndị enyi gị bụ ndị hụrụ Jehova n’anya, ha ga-enyere gị aka ikpebi ihe ndị bara uru ị ga na-eme ma gbaara nsogbu ọsọ. (Ilu 13:20) Àgwà ọma ha na-akpa ga-enyere gị aka ịna-ejide onwe gị ka ha. Nke bụ́ eziokwu bụ na àgwà ọma gị ga-agbakwa ha ume. Ọ bụrụ na anyị ana-ejide onwe anyị, anyị na Chineke ga na-adị ná mma, obi ga na-atọ anyị ụtọ, ọ ga-abakwara ndị anyị hụrụ n’anya uru.
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Septemba 2017